Android – My Doctor
Android	virkill	2015-10-08T23:17:55+00:00
By DrMay ThantSyn| 2019-08-20T14:24:31+00:00	August 20th, 2019|
ဒဏ်ရာရပြီးနောက်အမာရွတ်ထင်မကျန်ရန် နည်းလမ်းကောင်းများ။ ဒဏ်ရာနဲ့အမာရွတ်ဆိုတာခွဲခြားမရနိုင်တဲ့အရာတွေပါ။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ခွဲစိတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သဘာဝအတိုင်းအနာကျက်သွားတဲ့အခါ အမာရွတ်ဆိုတာအနည်းနဲ့အများဖြစ်ပေါ်စမြဲပါ။ ဒဏ်ရာကြီးလေ အမာရွတ်ကကြီးမားပြီးကုသရခက်ပေမယ့် ဒဏ်ရာအသေးစားလေးတွေမှာတော့ အမာရွတ်ကိုမသိသာအောင်လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရပြီး အမာရွတ်သိသာထင်ရှားစွာ ထင်ကျန်မနေရစ်စေရန်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဒဏ်ရာရပြီးနောက် အမာရွတ်ထင်မကျန်စေရန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ၁။ထိခိုက်ပြတ်ရှနာ၊ကုတ်ခြစ်ပေါက်ပြဲနာများကို အစဉ်အမြဲသန့်ရှင်းနေအောင်ထားပါ။ အဆိုပါအနာများကို ဆပ်ပြာပျော့ပျော့နှင့်ရေဖြင့် နူးညံ့စွာဆေးကြောပေးပါက ရောဂါပိုးများနဲ့အသားစအရိအရွဲတွေကိုစင်ကြယ်စေပြီးအနာကျက်ခြင်းကိုမြန်ဆန်စေကာ
By DrMay ThantSyn| 2019-08-20T14:20:22+00:00	August 20th, 2019|
ဝက်ခြံပေါက်ပြီး အမာရွတ်ထင်မကျန်ခဲ့စေဖို့။ လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားမယ့်အကြောင်းအရာလေးပါ၊ဝက်ခြံပေါက်ပြီး အမာရွတ်တွေမကျန်ခဲ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတဲ့။ ဝက်ခြံတွေဟာပေါက်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခပေးသလို၊ပျောက်သွားတဲ့အခါမှာလဲ အမာရွတ်တွေထင်ကျန်ရစ်ပြီးဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးဝက်ခြံထွက်ပြီး အမာရွတ်တွေထင်မကျန်ရစ်အောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာလေးတွေကို ပြောပြပေးပါ့မယ်။ လုပ်ဆောင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကတော့- ၁။ဝက်ခြံကိုစောနိုင်သမျှစောစောကုပါ။ ဝက်ခြံစထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဆရာဝန်နှင့်ပြသသင့်ပါတယ်။ စောစောကုသခြင်းဟာ အရေပြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုနည်းစေပြီး အမာရွတ်ဖြစ်ခြင်းကိုလဲသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ၂။ဝက်ခြံပေါက်ထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ ဆရာဝန်နှင့်ပြသသင့်ပါတယ်။ အရေပြားဟာ ပေါက်ပြဲသွားပြီဆိုတာနဲ့ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုသဘာဝအတိုင်းစပါတယ်။ ဒီအခါမှာစိတ်ထင်ရာဆေးလိမ်းဆေးသောက်ခြင်းဟာ
By DrMay ThantSyn| 2019-08-20T13:58:27+00:00	August 20th, 2019|
ကလေးဘဝကအမာရွတ် ကြီးတဲ့အထိမပါချင်လျှင် ကလေးသဘာဝဆော့ကြ ကစားကြရင်းနဲ့အနည်းအများ၊အကြီးအသေးဆိုသလို ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အနာကျက်ပြီး ဖြစ်ကျန်ခဲ့တဲ့အမာရွတ်တွေဟာ ကြီးတဲ့အချိန်ထိထင်းထင်းကြီးပါလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကလေးဘဝက အမာရွတ်တွေကြီးလာတဲ့အချိန်ထိပါလာတာကိုလျှော့နည်းသက်သာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။ အမာရွတ်တွေဟာ အရှင်းပျောက်အောင်လုပ်ရခက်ပေမယ့် မထင်ရှားအောင်၊မသိသာအောင်တော့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကတော့ အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ပေးရမှာပါ- ၁။ရှောက်သီးဖျော်ရည်။ -ပထမဦးဆုံး အမာရွတ်တစ်ဝိုက်ကို သေချာစွာဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ - ရှောက်သီးဖျော်ရည်ကို
By DrMay ThantSyn| 2019-08-20T13:46:19+00:00	August 20th, 2019|
ဆံကေသာနှင့်ဗောက်ရောဂါ ဗောက်ဆိုတာတော့လူတိုင်းနဲ့မကင်းကြသလို လူတွေကိုအတော်လဲအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးရေပြားတွေယားယံပြီး အဖတ်အဖတ်လေးတွေကွာကျတတ်လို့ လူသူကြားထဲမလုံမခြုံဖြစ်စေတတ်တာအမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့အဖြစ်များပြီး လူတွေကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ဗောက်အကြောင်းကို တီးခေါက်မိတယ်ရှိရအောင်ပြောပြလိုက်ရပါတယ်။ ဗောက်ဆိုတာဘာလဲ??? ဗောက်ဆိုတာဦးရေပြားဆဲလ်အသေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဦးရေပြားဟာ အရေပြားကျန်းမာစေရန်အတွက်ဆဲလ်အသစ်တွေကိုဖွဲ့စည်းကာ ဆဲလ်အဟောင်းတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပါတယ်။ ဖယ်ရှားခံရတဲ့ဦးရေပြားဆဲလ်အဟောင်းတွေဟာ အဖြူ(သို့)အညိုရောင်အဖတ်လိုက်လေးတွေကွာကျကုန်ပါတယ်၊ဒါဟာပဲ ဗောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗောက်ဟာကူးစက်တတ်သလား??? ဗောက်ဟာ လူတစ်ဦးမှတစ်ဦးကို အလွယ်တကူမကူးစက်တတ်ပါဘူး။ ဗောက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေက ဘာတွေလဲ???
By DrMay ThantSyn| 2019-08-20T12:35:07+00:00	August 20th, 2019|
ဆံပင်ကျွတ်ရသည့် အကြောင်းရင်းများ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ သန်း(၈၀)သော အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတွေဟာ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းပြဿနာကိုနေ့စဉ်နှင့်အမျှ ခံစားနေကြရပါတယ်တဲ့၊ဒါကြောင့်သင်တစ်ယောက်ထဲတော့မဟုတ်ပါ၊စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ ဦးခေါင်းမှာပျမ်းမျှအနေနဲ့ဆံပင်တစ်သိန်းလောက်ရှိတဲ့အထဲက နေ့စဉ်နှင့်အမျှဆံပင် (၅၀ မှ ၁၀၀ ကြား) ပုံမှန်ကျွတ်နေပါတယ်။ ကျွတ်သွားတဲ့ဆံပင်တွေဟာ အသစ်ပြန်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်၊ဒါပေမယ့် ဒါဟာလဲအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး၊အကြောင်းအရာတွေအများကြီးအပေါ်မှီတည်နေပါသေးတယ်။ ဆံပင်ဘယ်လိုကျွတ်လဲ??? ဆံပင်ဟာသူကျွတ်ချင်သလိုပဲကျွတ်ပါတယ်😬 ကျနော်တို့မှန်းဆလို့မရသလို လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးလဲမတူပါဘူး။ လူကြီးတွေမှာပိုအကျွတ်များပြီး ကလေးတွေမှာလဲတစ်ခါတစ်ရံကျွတ်လေ့ရှိတာပါပဲ။
By DrMay ThantSyn| 2019-08-20T12:22:20+00:00	August 19th, 2019|
ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးမျိုး လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ရှိသလိုပဲ ရောဂါဝေဒနာတွေလည်း ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး မျိုးစုံရှိပါတယ်။ ဒီလိုပဲ လူတိုင်းဖြစ်ဖူးတဲ့ ခေါင်းကိုက်တာမှာလည်း ပုံစံကွဲတွေ အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့။ ✔ဘယ်လို အမျိုးအစားခွဲမလဲ ?? (၁)အကြောင်းပြချက် ရှာလို့မရဘဲ ကိုက်တဲ့ Primary Headache နဲ့ (၂)ရောဂါအခံတစ်ခုခုကြောင့်
By DrMay ThantSyn| 2019-08-19T15:13:13+00:00	August 19th, 2019|
မိုးမိပြီး ခေါင်းကိုက်တဲ့အခါ ခေါင်းကိုက်နိုင်တဲ့ အကြောင်းပေါင်းများစွာရှိပေမဲ့ လူတိုင်းကို အနည်းနဲ့အများ ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းကတော့ ရာသီဥတုပါ။ အထူးသဖြင့်ပြောရရင်တော့ မိုးရေပေါ့။ မိုးရာသီမှာ မိုးရေစိုတာ သဘာဝတစ်ခုဖြစ်သလိုပဲ မိုးမိပြီးရင် ခေါင်းကိုက်တတ်တာ ဖြစ်နေကျ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ✔ဘာကြောင့်ကိုက်လဲ ?? - ခေါင်းကိုက်တာက အအေးမိဖျားနာနဲ့
By DrMay ThantSyn| 2019-08-19T15:03:47+00:00	August 19th, 2019|
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ခေါင်းကိုက်လျှင် လူတိုင်းခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။ သူ့အလိုလို ပြန်ပျောက်တတ်သလို မပျောက်နိုင်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်လူတစ်ယောက် ခေါင်းကိုက်တာသိပ်အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ ဗိုက်ထဲမှာ အသက်သေးသေးလေးတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းပေးထားရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ယောက် ခေါင်းကိုက်ရင်တော့ ပြဿနာရှိပါပြီ။ ခေါင်းကိုက်စေမဲ့ အကြောင်းတွေ သိပ်များပေမဲ့ သက်သာပျောက်ကင်းစေမဲ့ ဆေးကတော့ ရှားပါတယ်။ ကလေးနဲ့ မတည့်တဲ့ဆေးတွေ
By admin2| 2019-08-19T15:02:06+00:00	August 19th, 2019|
By DrMay ThantSyn| 2019-08-20T12:20:30+00:00	August 19th, 2019|
ကိုယ်ပူကျအောင် ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ ကိုယ်ပူတက်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေအပြင် တခြားအကြောင်းတွေလည်း အများကြီး ရှိပေမဲ့ လူတွေစိတ်ပူတာကတော့ နေမကောင်းဖျားနာရင် တက်တဲ့ ကိုယ်ပူချိန်ကိုပါပဲ။ ကိုယ်ပူလာရင် မြန်မြန်ကိုယ်ပူကျစေချင်တာက လူ့သဘာဝပါ။ ✔ဒီတော့ ကိုယ်ပူချိန်ကျအောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ ?? ▪ သာမိုမီတာနဲ့ ကိုယ်ပူချိန်တိုင်းပါ ဖျားရင် ဖြစ်တတ်တဲ့
By DrMay ThantSyn| 2019-08-18T20:24:31+00:00	August 18th, 2019|
ဘာအတွက်သုံးရတာလဲ ?? Nebulizer ဆိုတာ ရင်ကြပ်ဝေဒနာရှင်တွေအတွက်တော့ မရှိမဖြစ် စက်တစ်ခုလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ 'တရွှီရွှီ'မြည်အောင် သေလုမြောပါး ကြပ်နေတဲ့ မောပန်းနေတဲ့ အဆုတ်တွေအတွက် Nebulizer ကောင်းကောင်းတစ်ခုက ထွက်လာတဲ့ ဆေးငွေ့တွေက စိန်တွေ ရွှေတွေထက် အဖိုးတန်တာပေါ့။ Nebulizer ဆေးငွေ့ရှူစက်ကို ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ၊
By DrMay ThantSyn| 2019-08-18T19:56:13+00:00	August 18th, 2019|
ပွေးအမြန်ပျောက်စေမည့်နည်းလမ်းများ လူတိုင်းနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပြီးလူတွေကိုအတော်ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ပွေးရောဂါ။ ဒီလိုရောဂါမျိုးကို ဘယ်လိုမြန်မြန်ပျောက်အောင်ကုသလို့ရမလဲဆိုတာကို သိချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုအနှောင့်အယှက်တွေပေး၊ဝေဒနာတွေပေးတတ်တဲ့ရောဂါမျိုးကို အမြန်သက်သာစေမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုတော့ သိထားသင့်တယ်မဟုတ်လားနော်။ ပွေးရောဂါကို ဘယ်လိုမြန်မြန်ပျောက်အောင်ကုမလဲ??? အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ပွေးကိုမြန်မြန်နှင်ထုတ်ပစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်... ၁။မှိုသတ်ဆေးပါဝင်သောလိမ်းဆေးများလိမ်းခြင်း။ Miconazole,clotrimazole & terbinafine တစ်ခုခုပါဝင်သောမှိုသတ်လိမ်းဆေးများကိုတစ်ရက်လျှင် ၂/၃ကြိမ် စိမ့်ဝင်အောင်လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် ပွေးကိုအမြန်ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ လိမ်းတဲ့အခါမှာလဲ ယားနာရဲ့အနားသတ်အပြင်ဘက်